Qaraxyo lagu qabtay Kismaayo & Axmed Madoobe oo xog bixiyey
July 31, 2020 Mahad Jama 0
KISMAYO(P-TIMES)- Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa marka hore dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ugu hambalyeeyay munaasabada ciida Carafo ee sanadka 1441-HIJRIGA.
Madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed xusuusiyay muhiimada ay leedahay in maanta oo kale la garab istaago dadka aan waxba haysan si ay farxad ugula ciidan bulshada, isagoona ku booriyay in qof walba uu garab istaago walaalkiisa aan waxba haysan taas oo ajir ay ugu sugan tahay wixii uu qof walba la baxo.
Waxa uu intaas ku daray madaxweynahu in dalkeenu uu la daala dhacayo duruufo kala duwan oo ay ugu weyn yihiin nabadgalyada iyo Xanuunka Covid19 oo Wali ka jira qaybo badan oo dalkeena ah isla markaana galaaftay dhaqaalahii aan markii horaba cagaha adag ku taagnayn ee bulshadeena.
Waxa uu ugu baaqay shacabka inay raacan talooyinka hay’adaha Caafimaadka iyadoo waliba hada loo diyaar garoobayo sidii loo fududayn lahaa xayiradaha saaran waxyaabaha bulshada muhiimka u ah iyadoo laga duulayo in dib loo bari taaro dhaqaalaha iyo nolosha shacabka.
Shacabka reer Jubbaland ayuu madaxweynahu uga mahad celiyay sida hay’adaha amaanka ay ugala shaqaynayaan nabadgalyada isagoo xusay in howlgaladii u danbeeyay ee ciidamada amaanku ay sameeyeen lagu soo qabtay maleeshiyaad iyo waxyaabaha qarxa oo ay doonayeen in shacabka ay ku dhibaateeyaan.
Puntland oo hambalyo u dirtay Ilhaan, Omar Fatah iyo Jamaal Osmaan oo ku guuleystay doorashooyinka Mareykanka.
Dagaalkii ka dhacay gobolka Mudug oo war laga soo saaray, DFS & Galmudug oo loogu baaqay inay….
Sheekh Shariif & Wasiirka arimaha dibada Finland oo kawada hadlay doorsahada dalka
Ciidamadii ugu badnaa oo hubka gurtay & Madaxweyne hogaaminaya